OKRSO's family: 07 February 2010
အတီးပဒိုမန်းရှာလားဖန်း ရုတ်တရက်မကွယ်လွန်မီ(၁)နာရီခန့်အချိန်မှာ စာရေးသူနဲ့ပဒိုမန်းရှာတို့
သတင်းကိစ္စတခုအတွက် အင်တာဗြူးလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် အင်တာဗြူးအပြီးမှာတော့ထွေရာလေးပါးတွေ ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ် အဲဒီမှာအတီးမန်းရှာက ရုတ်တရက် စကားဖြတ်ပြီး စာရေးသူကို "မန်း OKRSO ကလူငယ်တွေကို ပြန်ပြီးစုစည်းပါအုံး ဒီလူငယ်တွေက အမျိုးသားရေးအတွက် တကယ်တက်ကြွတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်တယ် တခုဘဲသူတို့မှာနိုင်ငံရေးအားနည်းနေတယ် အဲဒီအတွက် အားလုံးပြန်ပြီးစုစည်းစေချင်တယ်"လို့ပြောပါတယ် ဒီစကားဟာOKRSO အဖွဲ့အပေါ်မှာ ထားရှိတဲ့သူရဲ့ဆန္ဒကို မကွယ်လွန်မီအချိန်လေးမှာ နောက်ဆုံးပြောသွားခဲ့တာပါ ဒါကြောင့်လက်ရှိ ထိုင်းမှာရှိနေတဲ့ OKRSO အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ နိုင်ငံတကာကိုရောက်နေတဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကို ဆန္ဒပြုချင်တာကတော့ အားလုံးအတွက် အတီးမန်းရှာပြောခဲ့တဲ့ သူဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒကို ၀ိုင်းဝန်းပြီးအကောင်အထည်ဖေါ်ကြိုးပမ်းကြစေချင်ပါတယ်။
အတီးကိုလေးစားတဲ့လူတွေအားလုံး အတီးဆန္ဒနဲ့ရည်မှန်းချက်ကို အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် နတ်သမီးတွေကြားထဲက အတီးမန်းရှာပြုံးပျော်ကျေနပ်နေမှာပါ။
မေ့ပျောက်လို့ မရသောနေ့ ရက်
အော် ….ဘာလို လို နဲ့ ဖေဖေါ် ၀ါရီ (၁၄) နေ့ ရောက်တော့ မှာပါလား…..အဲဒီနေ့ ရောက်တိုင်း ကျမတို့ ကရင်လူမျိုးစုတွေရဲ့ရင်ထဲမှာ မမေ့ နိုင်စရာ၊ အောက်မေ့ ဖွယ်ရာဖြစ်ရပ်လေးတစ်ခု ကတော့ကျမတို့ အားလုံးတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသံမှိုစွဲသလို စွဲ ထင်ကျန်ရစ်နေပါ ရောလား……
ဖေဖေါ်ဝါရီ(၁၄) ရက်နေ့ ဆိုတာ ချစ်သူများနေ့အဖြစ်လောကကြီးထဲမှာရှိတဲ့လူသားတွေအားလုံး ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာနေ့ တစ်နေ့အ ဖြစ် သတ်မှတ် ခဲ့ ကြပါ တယ်…သို့ သော်လည်း အဲဒီနေ့ ကို ချစ်သူများနေ့အ ဖြစ် ဆို ရိုးရှိခဲ့ ပြီးချစ်ခင် ကြင်နာသူအ ချင်းချင်းအမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများနှင့်သူတို့ တွေရဲ့အချစ်သင်္ကေတ တွေကို အ ချစ်ခံ ရသူများသိ အောင် အမှတ်တရ အ ဖြစ် ဖ လှယ်ပေးခဲ့ ကြပါ တယ်….
သို့ ပေ မယ့် လည်း အဲဒီနေ့ လို ပျော်ရွှင်စရာနေ့ တစ်နေ့ အ ဖြစ်ကနေ ၀မ်းနဲမှတ်တမ်းတင်ရသောနေ့တစ် နေ့အ ဖြစ် သို့ ပြောင်းလဲခဲ့ ရ သောကျမတို့ ကရင်လူမျိုးတွေရဲ့ရင်ထဲ အသည်းနှလုံးထဲမှာ ဟိုး မနေ့ တစ်နေ့ကလို ပဲ ဖြစ် ခဲ့ သ လို ကျ မ တို့ရဲ့့ မြင့် မြတ်လှတဲ့ မျိူးချစ် ခေါင်းဆောင် အာဇာနည် သူရဲကောင်း ပဒိုမန်းရှားလားဖန်း ရဲလုပ်ကြံခံရမှု အတွက် ကျမတို့ ကရင်လူထုအားလုံး အတွက်သူ့ ရဲ့ အ ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ချစ်ချင်းများစွာ နဲ့အသက်ပေးခဲ့ရ သော နေ့တစ်နေ့အ ဖြစ် ၀မ်းနဲယူကျုံး မရဖြစ်ခဲ့ ရပါတယ်…….. ကရင်လူထု တစ်ရပ်လုံးကို ချစ် သောကျမတို့ ရဲ့အာဇာနည် ခေါင်း ဆောင် ပဒိုမန်းရှာလားဖန်း က တော့ သူ့ ရဲ့ အသက် သွေးစီး ချောင်းနဲ့သူချစ်တဲ့ ကရင် တစ်မျိုးသား လုံးကိုထာဝရ လက်ဆောင်တစ်ခုအ ဖြစ် အ သက်ပေးဆပ်သွားလေသ လား……
ကရင်တစ်မျိုးသားလွတ်မြောက် ပြီး ငြိမ်းချမ်းသောနိုင်ငံ သစ်တစ်ခု ရရှိ ဖို့ ကြိုးစားနေ ဆဲမှာပဲ ကြင်နာမှုကင်းလှသော၊ ရက်စက် ယုတ်မာသော လူ တစ်စု ကြောင့် ဒို့ ကရင် တစ်မျိုးသားလုံး လေးစားလှသော အမျိုးသား ခေါင်းဆောင် ပဒိုမန်းရှာ လားဖန်းကို သေနတ်နဲ့ ရက်စက်စွာ ပြစ် သတ် ခဲ့ ပြီးသွေးချောင်း စီးခဲ့ရသောနေ့ တစ်နေ့ ကို ဘယ်သူမေ့ နိုင်မှာလဲ…..
ဘာကြောင့်အဲဒီလို လုပ်လိုက်ရတာ လဲ? သူ့ တို့တွေမှာရောတ ကယ်ဘဲ မျိုးချစ်စိတ် သနားညာတာသော စိတ်ပျောက်ဆုံး ကုန်လေရော့သလား……………
မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်မြက်အောင် ကျမတို့ ရဲ့ကရင်လူငယ်တွေကို မွေးထုတ် ပေး သော ဒို့ကရင် ခေါင်းဆောင် မျိုးချစ်အာဇာနည် ပဒို မန်းရှာလားဖန်းကို ဒီလို တရားမျှ တမှု ကင်းသော လုပ်ရပ် ကြောင့်ကရင်လူမျိုးတွေရဲ့နှလုံးသားမှာဘယ်တော့ မှမေ့ ပျောက်ပြစ် လို့ မရသော ဂန္ဓ၀င်ကျောက်တိုင်အဖြစ် မိမိတို့ ရဲ ကိုယ်စီနှလုံးသားထဲမှာ ရာသက်ပန်စွဲထင်ကျန်ရစ်နေမှာပါ။
ကျမတို့ ချစ်လှစွာသောမျိုးချစ်ခေါင်းဆောင်ပဒိုမန်းရှာလားဖန်းကို သူမရှိတော့ ပေမဲ့ သူရှိခဲ့တုန်းကလို ပဲ သူမျော်လင့် ခဲတဲ လွတ်လပ်သော ဒီမိုကရေစီ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဘို့ အတွက် ကျန်ရှိနေသေးသောကရင်ခေါင်းဆောင်များနှင့်ကရင်လူငယ်များအားလုံးတက်ညီလက်ညီလို ရာပန်းတိုင်ရောက်ရှို ဘို့ အ တူတကွလက်တွဲပြီး ကြိုးစားသွားကြမှပါ….ကရင်မျိုးချစ်အာဇာနည်ပဒိုမန်းရှာလားဖန်း ကောင်းရာသုဂတိလားပါ စေ…
အမှတ်တရ ရက်စွဲ (ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၄ ရက်)
Labels: မေ့ပျောက်လို့ မရသောနေ့ ရက်
ထိုင်းသို့ ပြန်လာသည့် ဒုက္ခသည်မိသားစု (၃) စု နောင်ဘိုးဒုက္ခသည် စခန်းတွင် နေခွင့်မရ
ကာယကံရှင်များ၏ဆန္ဒမပါဘဲ ထိုင်းဘက်မှ မြန်မာဘက်သို့ ပြန်ပို့ခံရသည့် စစ်ပြေးဒုက္ခသည် မိသားစု (၃) စုသည် ယမန်နေ့က ထိုင်းဘက်သို့ ပြန်လာကြရာ နောင်ဘိုး ယာယီစစ်ပြေး ဒုက္ခသည်စခန်းအာဏာပိုင်များက ၎င်းတို့ကို လက်မခံတော့သဖြင့် စခန်းပြင်ပတွင် နေထိုင်နေရသည်ဟု ပြန်ပို့ခံရသူတဦးက ပြောသည်။
ပြန်ရောက်လာသူ စောဖားမယ်လယ်က “မြန်မာဘက်ရောက်တော့ ဒီကေဘီအေက အပြင်ထွက်ခွင့်မပေးဘူး၊ စိုက်ပျိုးစားဖို့လည်း ခွင့်မပြုဘူး၊ ဟင်းရွက်ထွက်ရှာခွင့်လည်း မပေးဘူး၊ ရွာထဲမှာပဲ နေရမယ်လို့ပြောတယ်။ သူတို့က မိုင်းတွေရှိတယ်၊ အပြင်ထွက်ခွင့် မပေးနိုင်ဘူး၊ နင်တို့ ဒီမှာမနေချင်ရင် ထိုင်းဘက်ကို ပြန်သွားလို့ရတယ်ဆိုလို့ ဒီဘက်ပြန်လာတာ။ ဟိုမှာက မိုင်းတွေကြားထဲမှာ ငါတို့လည်း ကြောက်တာပေါ့။ ဒီပြန်ရောက်တော့ ဒုက္ခသည်စခန်းထဲ ၀င်ခွင့်မရတော့ဘူး၊ အခုစခန်းအပြင်မှာပဲ နေရတယ်” ဟု ပြောသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ တာ့ခ်ခရိုင် ထာ့ဆောင်ရန်းမြို့နယ်ရှိ နောင်ဘိုးယာယီဒုက္ခသည်စခန်းမှ ဒုက္ခသည် (၁၀) ဦးပါဝင်သည့် မိသားစု (၃) စု ကို ဒေသခံလုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ယခုလ (၅) ရက်နေ့က မြန်မာဘက်သို့ ပြန်ပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒုက္ခသည်အရေးဆောင်ရွက်နေသူတဦးက “ဒီလူတွေကို ထိုင်းလုံခြုံရေးတွေက ၀င်ခွင့်မပေးတော့ဘူး။ ဒီလိုပေးဝင်လိုက်ရင် နောက်ထပ်အများကြီး ထပ်လာရင် ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ၊ လုံးဝခွင့်မပြုနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ ဒီလူတွေအတွက် ရိက္ခာကို စခန်းမှာရှိတဲ့ လူတွေကပဲ ၀ိုင်းပေးကြတယ်” ဟု ပြောသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ တာ့ခ်ခရိုင် ထာ့ဆောင်ရန်းမြို့နယ်တွင် ခိုလှုံနေသည့်ကရင်စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များအား မြန်မာဘက်သို့ ပြန်ပို့မည့် အစီအစဉ်များကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း ယခုလ (၅) ရက်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောကြားခဲ့သည်။
မြေမြှုပ်မိုင်းကွင်းများ အများအပြားရှိသည့် နယ်မြေသို့ ကရင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအား နေရပ်ပြန်ပို့မည့်ကိစ္စကို ရပ်ဆိုင်းပေးပါရန် ထိုင်းအခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေး ဆောင်ရွက်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံတကာမှ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့များက ထိုင်းအစိုးရထံ မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ပြီးနောက် ထိုသို့ ဒုက္ခသည်များ ပြန့်ပို့ရေးအစီအစဉ်ကို ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပြန်ပို့ခံရသော ဒုက္ခသည်များ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာ
ထိုင်းနိုင်ငံ တာ့ခ်ခရိုင် ထဆောင် ယန်းမြို့နယ်ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်း၌ မကြာသေးခင် ရက်ပိုင်းက ပြန်ပို့ခံလိုက်ရသော ကရင်ဒုက္ခသည် ၁၂ ဦး ယနေ့ ပြန်လည် ရောက်ရှိလာ သည်ဟု ကရင် အမျိုးသမီး အစည်းအရုံး (KWO) ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ နော်ဘလူးမင်း နိုက်ဇန် က ပြောသည်။
[ပြီးခဲ့သည့် သောကြာနေ့က ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် တာ့ခ်ခရိုင် ထဆောင်ယန်း မြို့နယ်ရှိ ဒုက္ခသည် စခန်းမှ ပြန်ပို့ခံရသော ကရင် ဒုက္ခသည်များကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ - Reuters)]
ပြီးခဲ့သည့် သောကြာနေ့က ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် တာ့ခ်ခရိုင် ထဆောင်ယန်း မြို့နယ်ရှိ ဒုက္ခသည် စခန်းမှ ပြန်ပို့ခံရသော ကရင် ဒုက္ခသည်များကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ - Reuters)
လွန်ခဲ့သည့် အပတ် သောကြာနေ့၌ ၎င်း ဒုက္ခသည်များကို ထိုင်းအာဏာ ပိုင်းများ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ပြန်ပို့ခဲ့ရာမှ လုံခြံမှု မရှိသည့် အတွက် ယခုကဲ့သို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
“ပြန်သွားတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ အတွက် လုံခြုံမှုမရှိဘူး အာမခံ ချက်လည်း မရှိဘူး မိုင်းတော တွေထဲမှာ နေရတယ်၊ အဲဒါကြောင့် သူတို့ တအား ကြောက်နေ ကြတယ်၊ မနေရဲလို့ ပြန်လာတာ ဖြစ်တယ်”ဟု နော်ဘလူး မင်းနိုက်ဇန်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ပြန်ပို့ရန် စီစဉ်ထားသည့် ဒုက္ခသည်များကို ထို့နေ့၌ပင် ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များ ဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး (UNHCR) တာဝန် ရှိသူတချို့ ဒုက္ခသည် စခန်းသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း၌ ထိုင်းအာဏာပိုင်များက ရပ်ဆိုင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဒုက္ခသည်များကို နေရပ်သို့ ပြန်မပို့ရန်အတွက် KWO အဖွဲ့အပါအ၀င် လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားနေသည့် အဖွဲ့အစည်းများက ပါဝင် တောင်းဆိုမှုများကြောင့် ယင်း အစီအစဉ်ကို ရပ်ဆိုင်းပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း နော်ဘလူးမင်းနိုက်ဇန်က ပြောသည်။
အမေရိကန် နိုင်ငံ ရီပတ်ဘလစ်ကန် နှင့် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ လွှတ်တော် အမတ် ၂၉ဦးတို့က စုပေါင်း လက်မှတ်ရေးထိုးကာ ဒုက္ခ သည်များအား နေရပ်သို့ ပြန်မပို့ရန် ပြီးခဲ့သည့်အပတ် သောကြာနေ့က ထိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် အဖိဆစ် ဝေ့ချာချီဝအား တိုက်တွန်း ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒုက္ခသည်များ နေရပ်သို့ ပြန်ပို့ခြင်း နှင့် ပတ်သက်၍ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားနေသည့် အဖွဲ့အစည်းများက “ဒုက္ခသည်များကို ပြန်ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် သေတွင်းကို ပို့တာနဲ့တူတယ်”ဟု ထောက်ပြခဲ့ကြသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇွန်လဆန်းပိုင်းက စ၍ ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံခရိုင်အတွင်း မြန်မာစစ်အစိုးရတပ်နှင့် DKBA ပူးပေါင်းတပ်များက KNU လက်အောက်ခံ KNLAတပ်မဟာ (၇) မှ တပ်စခန်းများကို ထိုးစစ်ဆင်မှုကြောင့် ကရင်ဒုက္ခသည်များ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးလာ ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဒုက္ခသည် အများစုမှာ ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများမှဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တချိန်တည်းမှာပင် ပဲခူးတိုင်း ညောင်လေးပင်ခရိုင်အတွင်းရှိ ကျေးရွာ ၂ ရွာကို စစ်အစိုးရ စစ်ဒေသကွပ်ကဲရေး ဌာနချုပ်(စကခ) ၁၁ လက်အောက်ခံ တပ်အင်အား ၂၀၀ ခန့်က ယခုလ ၇ ရက်နေ့က လက်နက်ကြီးများဖြင့် အချက်၂၀ ပစ်ခတ်ခဲ့ ကြောင်း Karen Department of Health အဖွဲ့မှ စောအယ်ကလူရွှေဦး က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ယင်း ကျေးရွာများမှ အိမ်ခြေ အလုံး ၂၀ အပါ အ၀င် ဆေးပေးခန်း တခု မီးရှို့ခံလိုက်ရသည်ဟုဆိုသည်။
ထိုင်းစစ်တပ်က ကရင်ပြည်နယ်တွင် တိုက်ပွဲများ မဖြစ်တော့ကြောင်း ပြောနေသော်လည်း နအဖ စစ်တပ်က စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှု များ ဖြင့် လူ့အခွင့် အရေး ချိုးဖောက်မှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ ဒုက္ခသည်တွေကို ပြန်ပို့ရန် မသင့်လျော်သဖြင့် ဆက်လက် ထားရှိ သွားရန် ထိုင်းအစိုးရကို တောင်းဆိုချင်ကြောင်း စောအယ်ကလူရွှေဦး က ပြောသည်။
ထို့အပြင် ဒုက္ခသည်အရေး နှင့် ပတ်သက်သည့် အစည်းတရပ်ကို ဘန်ကောက်မြို့၌ မနက်ဖြန် ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားပြီး ထိုင်းဝန်ကြီး များ အပါအ၀င်၊ ထိုင်းစစ်တပ်၊ UNHCR တာဝန်ရှိသူများ၊ ထိုင်း - မြန်မာ နယ်စပ်တလျှောက် ကူညီ စောင့်ရှောက်ရေး ညွန့်ပေါင်း အဖွဲ့ (TBBC)နှင့် ကရင် လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းများက တက်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Labels: ပြန်ပို့ခံရသော ဒုက္ခသည်များ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာ
ထိုင်းသို့ ပြန်လာသည့် ဒုက္ခသည်မိသားစု (၃) စု နောင်ဘ...